Breziliana Iray Mpitsara Milaza Fa Tomponandraikitra Tamin’ny Nahavoatifitry ny Polisy Azy Teo Amin’ny Masony Ilay Mpakasary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2016 17:24 GMT
Nanerana ireo tanàna Breziliana ireo hetsi-panoherana goavana an-dalambe ny volana Jona 2013, miaraka amin'ireo olona an-tapitrisany nitaky ny hisian'ny tolotra tsaratsara kokoa avy amin'ny fanjakana. Voatifitra teo amin'ny masony ihany koa i Juliana Vallone, mpanao gazety avy ao amin'ny gazety an-tsoratra Folha de São Paulo, nandritra ireo hetsi-panoherana, fa ny tsy nitoviany tamin'ny an'i Silva, sitrana soa aman-tsara izy.
Namerina namoaka ny ampahan'ny fanapahankevitry ny mpitsara, Olavo Zampol Júnior, ny vohikala Ponte Jornalismo:
Ao amin'ny media sosialy, maro ireo Breziliana naneho ny heviny tamin'ilay didy nivoaka, nilaza fa tsy manana fiarovana tsotra fotsiny izao ireo mpanao gazety manoloana ny herisetran'ny polisy rehefa mandrakotra hetsi-panoherana, ary indraindray aza tena kendrena mihitsy. Matetika no miasa amin-kerisetra ireo polisin'i Brezila, tsy hoe amin'ireo mpanao gazety ihany fa koa amin'ireo vahoaka mainty any amin'ireo “favelas” ao amin'ny firenena, namono mponina nefa tsy nibaby ny helony ireo mpiandraikitry ny polisy tany, araka ny lazain'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona.
Nanao fanangonantsonia tamin'ny Change.org i Silva, nangataka fampakarana didy tamin'ny fitsaràna ao São Paulo hamerina hijery ny fanapahankevitr'ilay mpitsara. Hatreto, nahangona sonia maherin'ny 3.000 isa io. Ao amin'ilay fanangonan-tsonia, milaza izao i Silva:
Ireo mpaneho hevitra amin'ny Aterineto sasany kosa nampitaha ny fanapahankevitr'ilay mpitsara taminà tranganà fihetsiketsehana hafa iray nikasika herisetra izay nahavoasazy avy hatrany ireo nitifitra. Ny volana Febroary 2014, maty i Santiago Andrade, mpaka lahatsary avy amin'ny toby fahitalavitra Breziliana taorian'ny nahavoan'ny tsipoapoaka azy raha izy teo am-pandrakofana fihetsiketsehana iny indrindra. Hita avy eo fa mpanao fihetsiketsehana roa no nanipy ilay tsipoapoaka, izay nandany taona iray tany am-ponja teo am-piandrasana ny fitsaràna azy ireo (taorian'ny fandoavana onitra navoaka izy ireo ny taona lasa iny ary vinavinaina ho voaheloka sy hahazo sazy anelanelan'ny roa ka hatramin'ny valo taona am-ponja).
Em SP, no dia 13 de junho de 2013, Sérgio Silva foi atingido por uma bala de borracha.
Davi Duarte, profesora, nanao fanehoankevitra tao amin'ny pejy Facebook-ny ihany koa:
Tao amin'ny Twitter sy Facebook, mampiasa ny tenifototra #culpadoporfotografar (meloka tamin'ny fakàna sary) ireo mpampiasa, mba hanehoany ny fanohanany an'i Silva ary mba hanoherana ny fanapahankevitr'ilay mpitsaran'i São Paulo. Ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny Article 19 ihany koa nitsangana niaraka tamin'ilay mpaka sary. Nampakatra ny didim-pitsaràna ho eny amin'ireo fitsaràna ambonimbony kokoa i Silva.